Baay'inni ummataa, sodaa ta'uu irraa gara carraatti
Baay'inni ummata biyya tokkoo guddina biyya sanaatiif carraadha moo gufuudha? Gaaffii jedhuuf deebiin wal fakkaataan osoo hin argamin tureera.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan yaadotni gurguddoon lama kan jiran yemmuu ta'an, inni jalqabaa baay'inni ummataa guddina walii gala biyya tokkootiif carraa guddaadha kan jedhuudha. Akka yaada kanaatti biyyi ummata baay'ee qabdu carraa ariitiidhaan guddachuu akka qabduutti ibsa.
Yaanni inni lammataa immoo, baay'inni ummata biyya tokko guddina biyyatiif gufuudha malee carraa ta'uu hin danda'uu jedhee kaa'a.
Yaadota lameen kana walitti araarsuuf sochiin yeroowwan dheeraaf taasifamaa turus, bifa nama hunda biratti fudhatama qabuufi ogeeyyota hunda amansiise ta'uu hindandeenye.
Haa ta'uu malee, yeroo ammaa baay'inni ummataa keessattuu, humni omishuu danda'u carraa malee gufuu akka hintaane ogeeyyotni hedduun kan irratti walii galaniidha.
Baay'inni ummata biyya tokkoo yemmuu dabaluufi hir'atu miidhaafi faayidaa mataasaa kan qabu ta'uu garuu ogeeyyonni damichaa ni ibsu.
Ogeeyyonni damichaa kunniin yeroowwan gara garaatti baay'inni ummataa dabaluun guddinna biyyaa irratti dhiibbaa maalii akka qabu qorataa bu'aasaas qaamota seera baasaniif akka galteetti dhiheessaa turaniiru.
Dhiheenya kana mariin baay'inni ummata biyya tokkoo kan hojirratti bobba'uu danda'uu guddina biyyaarratti dhiibbaa akkamii akka qaburratti Akaadaamiin Saayinsii Itoophiyaa qaamota dhimmichi ilaallatu waliin marii adeemsisee ture.
Itoophiyaan yoo xinnaate lammiilee humna omishaa ta'aniifi akaakuuwwan hojii gara garaa irratti hirmaachuu danda'an hanga waggoota 35n dhufaniitti kan qabdu ta'uushee kan himan yunversiitii Finfinneetti ogeessa baay'ina ummataa, Dr. Asaffaa Hayilamaraam, carraa kanatti fayyadamuuf tarsiimoofi imaammanni mootummaadhaan bahu carraa kanaan walsimuu qaba jedhu.
Mootummaa bifa adda ta'een barnoota, fayyaafi misooma hawaasummaa kanneen birootiif dursa kennee dargaggootni investimentiirratti baay'inaan akka hirmaataniif haala mijataa uumuu kan qabu ta'uu himanii, lammiilee hojjachuu danda'an hunda hojitti bobbaasuun ni danda'ama.
Kanaafis qulqullina barnootaa mirkaneessuu, omishaafi omishtummaa dabaluu, aadaa qusannaa dagaagsuufi omishtummaa dubartootaa mirkaneessuufi hirmaannaa isaan guddina biyyaa irratti qaban dabaluun carraalee jiran hundatti fayyadamuun murteessaa ta'uu ibsu.
Dhuma bara 2016tti hooggantootni gamtaa Afrikaafi biyyootaa, dhimma dargaggoota irratti dursa kennanii hojjachuuf waliigaltee kan mallatteessan ta'uu kan himan immoo bakka buutuu Faawundeeshiinii Paakyaardi Aadde Yamisraach Balaayneeti. Akka isaan jedhanitti, Itoophiyaan biyyoota waliigalticha mallatteessaan keessaa ishee tokko.
Humna omishaa sirnaan itti fayyadamuuf biyyootni hundi sochii cimaa taasisuu akka qabaniifi gama kanaan hojii milkaa'aa hojjachuuf karoora yeroo dheeraa baafachuufi sochii hunda dhuunfate keessa galuun murteessaa akka ta'e himu.
Dargaggootatti fayyadamuu dhabuun dhimmoota kallattidhaan sassaabdummaa kiraatiin walqabatan keessaa isa tokko ta'uu kan himan immoo ministira Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii, Aadde Dammituu Hambisaati. Keessattuu hirmannaa dubartootni gama kanaan qaban cimsuun akka ijootti fudhatamuu kan qabu ta'uu dubbatu.
Qorannoowwan haaraa akaadaamichi baasu hojirra oolchuuf mootummaan qophaa'aa ta'uu kan himan Aadde Dammituun, dhimmoota kanneen biroo faayidaa lammiilee biyyaatiif qaban hundi wanti hojirra hinoolleef kan hin jirre ta'uu ibsu.
Bu'aalee qorannoofi qo'annoo yeroo garaa garaatti dhimmoota adda addaa irratti hojjataman gara hojiitti hiikuu irratti rakkoo guddaan jiraachuusaa himamaa tureera.
Bu'aaleen qorannoo kunnuun kan adeemsifaman garuu baasii olaanaan irratti dhangala'eeti waan ta'eef waan akka salphaatti ilaallamu miti.
Humna omishaa baay'ee qabaachuun guddina waliigalaa biyyaa irratti shoora olaanaa kan qabu waan ta'eef baay'ina ummataa akka sodaatti ilaaluun hafaa jira.
Walumaagalatti, baay'inni biyya tokkoo carraadha malee sodaa akka hintaane hubatamee humni omishaa hundi hojii malee akka hinteenye xiyyeeffannoon hojjatamuu qaba.
Torban kana/This_Week 43543
Guyyaa mara/All_Days 1468323